> Resource > iPad > Sida loo abaabulo Photos on iPad
Waxaan leeyahay iPad ah 2 oo doonaya in ay abaabulaan galay albums photos aan laakiin lama jidaynayey igu sameeyo ee hab wax la xusho.
Waxay qaateen sawiro badan oo aad iPad? Hadda, waxaa laga yaabaa in aadan sugi karin in uu abaabulo sawirada. si ay u dhawraan photos on your iPad si fiican u abaabulan, aad aad kula talinayaa qabanqaabiyaha wejiyo iPad sawir. Waa Wondershare TunesGo (Windows). Dadka isticmaala Mac, waxaad u tagi kartaa si Wondershare TunesGo (Mac) caawimaad. Labada nooc oo barnaamijkan siiyo fursad ay ku abaabulaan si fudud photos iPad aad. Sidaa daraadeed, aad awoodo in uu abaabulo sawiro by dejinta, dhoofinta, tirtirka iyo in ka badan.
Download app this in uu abaabulo photos on iPad.
Fiiro gaar ah: Waxaad ka eegi kartaa iPads ku taageeray, shuruudaha nidaamka, .etc macruufka ah .
Full Hage ku saabsan sida loo abaabulo photos on iPad
Download iyo rakibi version saxda ah ee barnaamijkan on your computer. In this article, waxaana dooneynaa in ay qaataan version Windows sida tusaale. Sida dadka isticmaala Mac, waxaad weli u qaataan karaa tilmaan la mid ah.
Tallaabada 1. Ma aad iPad ku xiran kombiyuutarka
Bilowga, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPad in kombiyuutarka deeruhu cable USB ah oo wuxuu galay. Tani qabanqaabiyaha sawir iPad si toos ah loo ogaado doonaa iPad. Markaas, furmo suuqa hoose, aad iPad la soo bandhigi doonaa waxa ku saabsan. Si aad ku eegaan xogta on your iPad, waxaad riixi kartaa icon kasta galeeysid bidix.
Tallaabada 2. iPad abaabulo sawiro
Guji "Sawirro" galeeysid ka tagay. Waxaad arki doontaa wax ku giringiriya ah Camera iyo Photo Library on xaq. Hadda, waxaad abaabuli kartaa sawiro ku yaal.
Photos dhoofinta duudduuban Camera iyo Photo Library si aad u computer. Dooro sawiro aad rabto inaad ka dhoofin oo guji "Dhoofinta in".
Photos Import ka PC si aad iPad . Fur maktabadda Photo ama album hoos Library Photo ah. Guji "Add" ku darto sawiro.
Samaynta, Iyo La magacaabo albums cusub . Guji "Add" si ay u abuuraan album cusub. Waxaa fur oo ka PC waxaa kasoo dajiyaan sawiro.
Si albums dhaqaaq photos Roll Camera . First dhoofiyaan photos camera oo duudduuban. Markaas, la abuuro album ah ama isticmaal album duug ah. Ku dar dhoofiyo photos camera liiska album ah.
Delete photos Maktabadda Photo iyo Roll Camera in Dufcaddii . Dooro sawirada aad jeclaan lahaa in meesha laga saaro. Markaas, guji "Delete" in ay iyaga saari iPad.
Photos Kulanka Xiisaha Leh ee duubey . Double guji sawirka aad rabto in aad la mahadiyo. In hab duubey ah, aad Mozilla karo gudaha / dibedda, isku shaandheyn iyo sawirka tirtirto.
Waa hagaag, in ay tilmaan buuxda oo ku saabsan sidii loo abaabuli lahaa sawiro on iPad. Iyada oo ay taasi soo abaabulay sawir iPad, waxaad had iyo jeer ku hayn karaa sawiro aad iPad si fiican u habaysan. Isku day inaad barnaamijkan on your u gaar ah.